केमिकल भरिने मेसिन बिक्रीको लागि - Npoat.com
रसायनहरू तिनीहरूको दृश्यता र स्थिरतामा बहुमुखी छन्। उत्पादन लाइन प्रबन्धकहरूको लागि विशेष अनुप्रयोगको लागि सही मेसिनरी छनौट गर्न महत्त्वपूर्ण छ, यो पानी पातलो वा अत्यधिक चिपचिपा रासायनिक समाधानहरूको लागि हो। NPACK ले तपाईंको उत्पादन लाइन पूरा गर्न प्रशस्त रासायनिक भरिने उपकरण र अन्य तरल प्याकेजि machines मेशिनहरू प्रदान गर्दछ। हामी तपाईंलाई प्याकेजिंग प्रणाली पूर्ण गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं जुन तपाईंलाई धेरै बर्षको लागि लगातार परिणामहरू प्रदान गर्दछ।
रासायनिक उत्पादकहरूले विभिन्न उद्योगहरूको लागि तरल पदार्थ प्रदान गर्छन्, सफाई उत्पादनहरू देखि ज्वलनशील तरल पदार्थसम्म। तिनीहरूको चिपचिपापन र विभिन्न स्थिरताहरूमा निर्भर गर्दै, रसायनहरू तिनीहरूको गन्तव्यहरूमा ढुवानीको लागि प्याकेजि products उत्पादनहरूको दायरामा राख्नु पर्छ। एक महत्वपूर्ण रसायन भरिने मेसिन यो महत्वपूर्ण कामको लागि उत्तम उपयुक्त छ। यी प्याकेजि machines मेशिनहरूले कचराको मात्रा कम गर्दछ जबकि कन्टेनरहरूको उच्च आवाज भर्न र क्याप गर्न सक्षम भइरहेको छ। थप रूपमा, यी मेशिनहरूले कामदारहरूको लागि स्वच्छ र सुरक्षित वातावरण प्रमोट गर्छन्।
यहाँ NPACK मा, हामीसँग रासायनिक भरिने मेसिनहरू छन् जुन लगातार र सही परिणामहरू प्रस्ताव गर्दछ। रासायनिक निर्माताहरूका लागि हामी दुबै कुञ्जी र अनुकूलित समाधानहरू प्रदान गर्दछौं जुन प्रभावी उत्पादन रनहरू निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् वा अवस्थित उपकरण क्षमताहरूको अपग्रेड गर्दा।
यो मेशिन एक प्रकारको उच्च र नयाँ टेक्नोलोजी भर्ने उपकरणहरू जुन माइक्रो कंप्यूटर प्रोग्राम (PLC प्रणाली), फोटोइलेक्ट्रिक सेन्सर र वायमेटिक उपकरणहरू द्वारा नियन्त्रण गरिन्छ।
विभिन्न आकारहरू, जस्तै वर्ग, गोलाकार, अण्डाकार, आदि जस्ता बोतलहरू भर्नका लागि उपयुक्त।
विश्वसनीय र कुशल रासायनिक प्याकेजि Mach मेशिनहरू
एक प्रमुख मुद्दा जुन धेरै रासायनिक उत्पादकहरूले अनुभव गर्छन् सही रूपमा उत्पादको साथ विभिन्न आकारका कन्टेनरहरू भर्दैछन्। ओभरफिलिंग कन्टेनरको अर्थ तपाईंको उत्पादलाई धेरै नै दिईन्छ। अन्डरफिलिंग कन्टेनरहरूले ग्राहकलाई अपमान गर्न सक्दछन् जुन पहिले विज्ञापन गरिएको रकमको लागि भुक्तान गरिरहेका छन्। एक भरिने भरिने मेसिनले प्रसंस्करण गरिएको रसायनको कुनै पनि प्रकारको लागि अधिक सही भर्ने दरहरूलाई बढावा दिन्छ।
अधिक सही तौल भरने र क्यापिंग क्षमताहरूको साथसाथै, एक कुशल भरिने मेसिन प्रणालीले तरल पदार्थ सार्न सक्दछ र अम्लता स्तरलाई क्लोगिंग वा स्पिलज बिना प्रतिरोध गर्न सक्दछ। तरल पदार्थ बाक्लो र अत्यधिक चिपचिलो वा पातलो र पानी भएको छ, रासायनिक भरिने मेसिनले तपाईंको परिचालन आवश्यकताको आधारमा चाहिएको मात्रा र दरमा यसलाई पम्प गर्न सक्दछ।
छनौट NPACK रासायनिक भरिने मेशिनहरू
NPACK अनुकूलित रासायनिक भरिने मेसिनहरूमा एक नेता हो। हाम्रो ईन्जिनियरहरूले भरिने मेशिनहरू रसायनिक उत्पाद, कन्टेनर प्रकार र कम्पनी अपरेशनको आधारमा डिजाइन गर्छन्।
रासायनिक तरलहरू जुन हामीले ह्यान्डल गर्दछौं त्यसले समावेश गर्दछ:
चिसो तरल पदार्थ
आक्रामक तरल पदार्थ
ग्राहकहरूले हाम्रो बहुमुखी प्रतिभाको कारण रासायनिक भरिने मेशिन आवश्यकताहरूको लागि NPACK चयन गर्नुहोस्। हाम्रो भरिने मेसिनले बोतलहरू, जेरी क्यान, भाँडा, ड्रमहरू र मध्यवर्ती थोक कन्टेनर (IBCs) लगायतका सबै आकारका कन्टेनरहरू ह्यान्डल गर्न सक्दछन् जुन ml मिलिमिटरदेखि toएल सम्म सम्म समाईन्छ। एक पटक इच्छित कन्टेनर भरिए पछि, तपाईंको रासायनिक उत्पादनहरू स्वत: क्यापिंग मेशिनरीमा जान सक्छन् एक कडा मोहर सुनिश्चित गर्न।
उत्तम मूल्यको साथ पूर्ण स्वचालित शीशी भरिने मेसिन रसायन भरिने मेशीन
तरल भरण मेसिन औषधि उद्योगमा बोतल भर्न उपयुक्त छ, जस्तै शीशीहरूमा पानी भर्ने, बोतलहरूमा रासायनिक एजेन्टहरू भर्ने। यो मेशिनले स्वत: बोतलहरूलाई रोक्दछ, मोल्डिंग ग्लास बोतलको लागि उपयुक्त छ जसको व्यास २२२ 30० mm० मिमी छ। सुविधाहरू १. टच स्क्रिन र मानव कम्प्युटर ईन्टरफेस आयात गर्नुहोस्, अपरेशन सजिलो छ २. आयातित पीएलसी नियन्त्रित स्टेपर मोटर, नियन्त्रण विधि उन्नत छ। उच्च स्थिरता र उच्च गणना गणना ...
कारखाना रासायनिक तरल भर्न मेसिन
भरिएको नोजल सामग्री SUS 4०4L स्टेनलेस स्टील भरने प्रकार सर्वो पिस्टन पम्प सीएएम अनुक्रमणिका शेन्डh्ग झुचेter्ग इन्भर्टर जापानको मित्सुबिशी पीएलसी सीमेन्स टच स्क्रीन सीमेन्स मुख्य मोटर एबीबी कम-भोल्टेज उपकरण स्नेइडर सिलिन्डर एयरटाक (ताइवानमा बनेको) सर्वो मोटर प्यानासोनिक ड्राइभ पेनासोनिक FAQ १ बारे। ईन्जिनियरहरु विदेशमा सेवा? A: ईन्जिनियरहरू विदेशमा सेवा मेसिनरीमा उपलब्ध; २. कसरी टेस्टिंगका लागि मेशिनहरू छन्? A: जुनसुकै समयमा हाम्रो कारखानाको सुपरिवेक्षण र निरीक्षण गर्न तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ; ...
स्टेनलेस स्टीलको मसाला सॉस कृषि रसायन वनस्पति तेल भर्ने मेशीन
यो मेशिन मुख्य रूपले बाक्लो चिपचिलो तरल पदार्थ र / वा सीमित परिवर्तनको साथ कण उत्पादनहरूमा प्रयोग गरियो। उदाहरणमा तरल साबुन, सौन्दर्य प्रसाधन र भारी खाना सॉसहरू समावेश छन् जहाँ सकारात्मक विस्थापन वा उच्च-दबाब भर्न आवश्यक छ। महँगो उत्पादनहरूको भोल्युमेट्रिक फिलिंगको लागि पनि उत्कृष्ट जहाँ उच्च शुद्धता आवश्यक छ। उच्च पूंजी लागत तर साना मेसिनहरूले पनि धेरै उच्च आउटपुट उत्पादन गर्न सक्दछन्। १. भरिने, क्याप-लक गर्दै, ...